Sunday February 16, 2020 - 09:57:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
"Fircown ma ahayn in uu dadka Muslimiinta ah laayo ee waxay ahayd in uu iskuulo u furo si tartiib ahna uu manhajkiisa uga dhaadhiciyo" fakarkan waxaa muddo hore bixiyay mid kamid ah khubarada reer Galbeedka, isagoo dadkiisa ku guubaabinayay
"Fircown ma ahayn in uu dadka Muslimiinta ah laayo ee waxay ahayd in uu iskuulo u furo si tartiib ahna uu manhajkiisa uga dhaadhiciyo" fakarkan waxaa muddo hore bixiyay mid kamid ah khubarada reer Galbeedka, isagoo dadkiisa ku guubaabinayay in ay muslimiinta u adeegsadaan Waxbarasho, halkii ay hub u isticmaali lahaayeen.
Iyagoo taa ka duulaya ayay dowladaha Yurub iyo Mareykanku aas-aaseen mu’asasadaad Waxbarasho oo ay ugu weyn tahay hay’adda Unesco, kuwaasoo dajiya manaahij Waxbarasho oo caqiido ahaan u dhaawacaysa marka uu qaato ardayga Muslimka ah.
Soomaaliya qeybaha ay ka joogaan DFS iyo ciidamada AMISOM iyo maamul goboleedyada waxaa inta badan ka shaqeeya manaahijtan iyadoo dowladaha keensaday ay ku bixiyaan dhaqaale aad u badan oo aanay xataa u quurin ciidamada xabadda u ridaya.
Ujeedada ayaa ah in jiilka Soomaaliyeed ee soo koraya la hanto, lagana dhigo kuwa cabsan afkaaraha reer galbeedka waana arrintii uu ka dagaalamay Alle ha u naxariistee Sayid Muxamad Cabduule Xassan, oo ay muddo 100 sano ah kasoo wareegatay geeridiisa.
Midawga Yurub ayaa haatan dhaqaale badan siinaya DF-ka gaar ahaan Wasaaradda Waxbarashada ee uu hogaamiyo Cabduullaahi Goodax Barre oo ah ninkii sannadkii lasoo dhaafay Baarlamaanka hor geeyay in wadanka Kaniisado laga dhiso.
Yurubtu waxay sheegeen in ay dowladda siinayaan 57 milyan oo lacagtooda Yuuraha ah si loo sii baahiyo manhajkooda Waxbarasho, looguna xoojiyo adeegyada iyo kaabayaasha uu u baahan yahay, sida:-qalabka iyo macallimiinta.
Manhajka ay DF-ka haatan wax ku barto carruurta, gaar ahaan markaad akhriso taariikhdavwaad la yaabeysaa waxaad arkeysaa iyadoo aad loo xayaysiinayo boqoradii soo maray Itoobiya, loogana faalloonayo sadax bog ama ka badan, halka saxaabada Nabiga qaarkood laba sadar oo kaliya looga hadlayo waana tan midda keentay in midowga Yurub uu dhaqaalahan badan u huro.
"Taageeradani waxay muujineysaa sida joogtada ah ee Midowga Yurub uga go'an tahay soo kabashada Soomaaliya iyo dadkeeda. Waxay calaamad u tahay isbedel ku wajahan sii jiritaanka iyo hoggaaminta" sidaas waxaa yiri mas'uul katirsan EU.
"Waxaan bogaadineynaa iskaashiga u dhexeeya mas'uuliyiinta waxbarashada iyo sida ay uga go'antahay inay si tartiib tartiib ah ugu maareeyaan adeegyada waxbarashada qaab isku mid ah," ayuu yiri Nicolas Berlanga Martinez, Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya.
Dhankiisa waxaa arrintan soo dhaweeyay Wasiir Goodax oo ay barbar fadhiyeen agaasimayaasha wasaaradaha waxbarashada ee maamul goboleedyada oo iyagana loogu yeeray munaasabaddan si ay qoondadooda uga qaataan, una sii ballaariyaan manhajka shirsheeyaha.
Haddaba waxaa la gudboon waalidka Soomaaliyeed iney ka fakaraan waxbarashada caruurtooda, waayo Nabiga Sallalaahu Calayhi Wasallam wuxuu inoo sheegay in caruurtu ku dhashaan fidrada, blasé labadii dhashay ay ka dhigi karaan kuwa gaalo ah.
Carruurtaada waa beerkaagii oo dhulka soconaya, haku aaminin manhaj ka wasakheynaya cadka yar oo sadrigiisa ku yaalla, kaasoo ay ku xukuman yihiin xubnaha jirka oo dhan, kaasoo haddii uu hagaago ay hagaagayaan, haddii uu xumaadana ay xumaanayaan.